Isku aadka ciyaaraha maanta
Horyaalka England ayaa manta iyo beritaba waxaa dhacaya ciyaaro ay kooxuhu isku arki doonaan. West Ham waxay wada ciyaari doonaan kooxda Waqooyiga London ka dhisan ee Tottenham.
Bernard Tekpetey oo ah ciyaartoy reer Ghana ah ayaa labo ciyaarood la ganaaxay ka dib markii ciyaarta looga saaray jawaabtii uu ka bixiyay eedayn lagu sheegay cay cunsurinimo ah.
Ciyaaryahanka Manchester United u dheela ee Romelu Lukaku ayaa sheegay in uu doonayo in taageerayaasha kooxdu ay ka gudbaan hadalkii hees ahaanta ahaa ee ay u qaadeen ee muranku ka dhashay.
Ciyaaryahan u dheeli jiray Australia, Erik Paartalu ayaa BBC-da u sheegay in "u safridda meel aan la aqoon" ay tahay ciyaar loo aado Kuuriyada Woqooyi.
Leicester oo Liverpool ka reebtay koobka Carabao Cup
Gool qurux badan oo Islam Slimani uu u dhaliyay Leicester ayaa kooxda u suurtagaliyay in ay khadka ka saarto Liverpool, iyaduna sidaa ugu gudubto wareegga afraad ee koobka Carabao Cup.
Rio Ferdinand oo feedhyahan noqonaya
Rio Ferdinand ayaa billaabaya xirfad cusub isaga oo feedhyahan noqonaya, labo sano ka dib markii uu ka fariistay kubadda cagta.
Urur midab takoorka la dagaalama oo la dhoho Kick It Out ayaa la xiriiray kooxda Manchester United si taageerayaasha kooxdu ay u joojiyaan halqabsiga midab takoorka ah ee ay ay ugu heeseen Romelu Lukaku.
Neymar iyo Cavani oo ku dagaallamay rigoore
Tababaraha naadiga Paris St-Germain, Unai Emery ayaa sheegay in uu dhex gali doono Neymar iyo Cavani haddii ay iskood uga heshiin waayaan murankii dhex maray.
Rooney oo aqbalay in uu isagoo khamraysan gaari waday
Ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa maxkamad ka soo muuqday oo ogolaaday in isaga oo khamri cabsan uu gaari waday.
Arsenal oo dib miciyo kala soo baxday
Alexis Sanchez ayaa gool qurux badan dhaliyay mar dambe, iyadoo Arsenal oo gool lagaga naxsaday ay u suurtagashay in ay iska soo mogto oo waliba badiso.
Harry Kane ayaa labo gool dhaliyay iyadoo kooxda Tottenham ay ka badisay Borussia Dortmund
Xiriirka kubadda cagta Yurub ee Uefa ayaa ganaaxay kooxda FC Basel ka dib markii ay taageerayaashoodu garoonka ka shideen waxyaabo qiiq kiciyay.
Labo gool oo uu dhaliyay Lionel Messi ayaa Barcelona gacan ka siisay in ay si sahlan uga badiyaan kooxdii ay ciyaarta kama dambaysta ah ee Horyaalka Yurub wada yeesheen sannadkii hore, taas oo ka dhacday garoonka Nou Camp.
Chelsea oo lix la dulmartay kooxda Qarabag
Davide Zappacosta ayaa dhaliyay gool qurux badan, Michy Batshuayi labo jeer ayuu goosha ku hubsaday shabaqa iydoo Chelsea ay mar kale goolashii ugu badnaa ee ay Horyaallada Yurub ka dhaliso la dul martay kooxda Qarabag oo tartankan u hor leeyahay.
Liverpool oo racfaan ka qaadanaysa ganaaxa Sadio Mane
Kooxda Liverpool ayaa racfaan ka qaadanaysa saddexda ciyaarood ee laga ganaaaxay Sadio Mane ka dib markii laga saaray ciyaartii ay Sabtidii la yeesheen Manchester City ee 5-0ta lagaga adkaaday.
Mourinho oo nugayl dareemaya marka uu Fellaini ka maqan yahay
Tababaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho ayaa sheegay in "in uu dareemayo in ay kooxdu ka tabar daran tahay sidii ay ahayd" marka uu ka maqan yahay Marouane Fellaini.
Haweeney garsoore ka noqotay ciyaar horyaalka Bundesliga ah
Sapain oo ba'satay xulka dalka Liechtenstein
Alvaro Morata iyo David Silva ayaa ka mid ahaa ciyaaryahannada goolasha dhaliyay markii Spain ay 8-0 ku dardartay xulka qaranka Liechtenstein.
Xulka kubadda cagta Suuriya ayaa boos ka ciriirsaday kooxaha la isku celinayo si uu midkood ugu soo booxo Koobka Adduunka ee sannadka 2018ka.
Dalalka koobka dunida u soo baxay iyo laacibiintooda
Maxaad kala socotaa dalalka Koobka Adduunka u soo baxay iyo laacibiintooda la loodin waayay?